रेडियो नेपाल अब मोबाइल एप्सबाट विश्वभर सुन्न सकिने
काठमाडौँ १ भदौ - रेडियो नेपाल अब मोबाइल एप्सबाट पनि विश्वभर सुन्न सकिने भएको छ।
अष्ट्रेलियाली किशोरद्वारा एप्पल सिस्टम ह्याक
सिड्नी १ भदौ - अष्ट्रेलियाका एक किशोर विश्वको नम्बर एक ब्रान्ड एप्पलको सिस्टम ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
चार बर्षभित्र अन्तरिक्षमा मानव पठाउने भारतको योजना
काठमाडौँ ३० साउन - भारतीय प्रधानमन्त्री पाँच वर्षभित्र अन्तरिक्षमा भारतको तर्फबाट यात्री पठाउने घोषणा गरेका छन्। छिमेकी चीनले सन् २००३ मा मानवसहितको अन्तरिक्षयान पठाउन सफलता प्राप्त गरेको थियो।
रुसी ह्याकरले इन्स्टाग्राम ह्याक गरेको विश्वभरका प्रयोगकर्ताको आरोप
एजेन्सी ३० साउन - सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ताले आफ्नो एकाउन्ट ह्याक भएको विश्वभरबाट जानकारी दिएका छन्।
मोबाइल हरायो? अब चिन्ता नगर्नुस्
काठमाडौँ २२ साउन - तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो? फुट्यो या बिग्रियो? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन। किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ।
फेसबुक र इन्स्टामा कति समय बिताउने? अब आफैँ तय गर्न सकिने
२० साउन - सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक गतिविधिको अभिन्न अंग बनिसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली रोबोट
काठमाडौँ १९ साउन - नेपाली युवा विद्यार्थी आफूले बनाएका रोबोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदर्शन गर्न जुटेका छन्।
ओपोले ल्याउँदैछ नेपालमा डुअल रियर क्यामेराको एथ्रीएस फोन
काठमाडौं १५ साउन - मोवाइल फोन कम्पनी ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ मिड–रेञ्ज स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौँ ८ साउन - सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा निःशुल्क वाइफाइ सेवा
भद्रपुर ४ साउन - झापाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले सर्वसाधारण जनतालाई सहज रुपमा इन्टरेनटमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले निःशुल्क वाइफाइ सेवा शुरु गरेको छ।
विश्वकै ठूलो बेइजिङ विमानस्थलमा अनुहार चिन्ने प्रविधी जडान हुने
बेइजिङ २ साउन - उच्च सुरक्षा सतर्कताका लागि बेइजिङको नयाँ विमानस्थलमा फेसियल रिकग्निसन (अनुहार चिन्ने) प्रविधी अपनाइने भएको छ।
काठमाडौं ३१ असार - यही श्रावण २ र ३ गते आईटी शैक्षिक मेला आयोजना हुने भएको छ।
काठमाडौं १४ असार - सामसुङ टिभीको लागि नेपालको आधिकारीक बिक्रेता हिम इलोक्ट्रोनिक्स प्रालिले टिभीको मुल्य घटाएको छ।
काठमाडौं ११ असार - ल्याण्डलाइन टेलिफोन र मोबाइलमा भएको कुराकानीको आवाज अभिलेख राख्ने (रेकर्ड गर्ने) प्रविधि नरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।
काठमाडौं २८ जेठ - यही असार ३ र ४ गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ।
काठमाडौं २७ जेठ - नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप ‘नेपाल टेलिकम’ लाई परिमार्जन गरी नयाँ रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
काठमाडौं २६ जेठ - नेपाल विद्यार्थी संघ सम्बद्ध विद्यार्थीले एक दिने इन्जिनियरिङ एक्जिविसन गरेका छन्।
काठमाडौं २३ जेठ - वैज्ञानिकले यमग्रहका विषयमा गरेको अनुमान असत्य भएको त्यहाँ पठाइएको अन्तरिक्षयानले खिचेर पठाएका तस्वीरबाट प्रमाणित भएको छ।
क्यानले ४९ जना प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने
काठमाडौं २१ जेठ - सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आईरहेको कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ, ले प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि यस वर्षदेखि छात्रवृतिको शुरुवात गरेको छ ।
फेसबुकले तपाइँसँग किन माग्दैछ नांगो तस्विर?
२० जेठ - फेसबुकले यतिबेला वेलायती प्रयोगकर्तालाई नयाँ सूचना जारी गरेको छ। ‘कृपया तपाइँ आफ्नो नांगो फोटो हामीलाई पठाउनुहोस्’, फेसबुक भन्छ। प्रयोगकर्तासँग फेसबुकले किन मागिरहेछ यस्ता तस्विर?
हरेक दुई दिनमा सूर्यजत्रो पिण्ड निल्नसक्ने विशाल ब्ल्याक होल फेला पर्‍यो
७ जेठ - खगोलशास्त्रीहरुले ब्रम्हाण्डमा अहिलेसम्म देखिएमध्येकै सबैभन्दा चाँडो वृद्धि भइरहेको ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्। यो यति चाँडो बढिरहेको छ, हाम्रो सूर्यजत्रो पिण्डलाई त हरेक दुई दिनमा निल्नसक्ने बताइएको छ।
नासाले मंगल ग्रहमा पठाउँदैछ यस्तो हेलिकप्टर (भिडियो)
२९ बैशाख - अमेरिकी अन्तरीक्ष एजेन्सी नासाले मंगलग्रहमा हेलिकप्टर पठाउने भएको छ। सन् २०२० मा ‘मार्स रोभर’ सँगै यो हेलिकप्टर पठाउन लागिएको हो।
अब फेसबुकले जोडी पनि बाँध्ने, डेटिङ एप ल्याउने जुकरवर्गको घोषणा
१९ बैशाख - फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरवर्गले आफ्नो कम्पनीले चाँडै नै डेटिङ एप ल्याउने घोषणा गरेका छन्। उनको यो घोषणासँगै अन्य जोडी बाँध्ने सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरुको सेयरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।
सुंगुरको काटिएको टाउकोमा दिमागलाई जीवित तुल्याउन वैज्ञानिकहरु सफल
१५ बैशाख - यल युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले शरीरबाट अलग गरिएको सुंगुरको टाउकोमा रक्तप्रवाह सञ्चालन गरेर दिमागलाई कैयौँ घण्टासम्म जीवित राख्न सफल भएका छन्।
विश्वकै ठूलो विमान परीक्षण उडानको तयारीमा
१२ बैशाख - पल एलेनको भलक्यान एरोस्पेस कम्पनीले निमार्ण गरेको विश्वकै ठूलो विमान गर्मी यामभित्र परीक्षण उडानका लागि तयारी भइरहेको छ।
बन्यो आत्माको आवाज सुन्ने यन्त्र
२६ चैत - अनुसन्धानकर्ताहरु एउटा यस्तो यन्त्र बनाउन सफल भएका छन्, जसले तपाईंको आत्माको आवाज सुन्न सक्छ। छक्क नपर्नुहोला, यो हेड सेट लगाएपछि तपाईंको मनभित्रको कुरा बुझ्न मुख खोलिराख्नै पर्दैन तर मनमनै भने तपाईंले ती शब्द उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सपनालाई चलचित्रझैँ कहिले रेकर्ड गर्न सकिएला?
२२ चैत -
हट्यो एनालग च्यानल
काठमाडौं १४ चैत - बुधबारदेखि एनालग टिभी च्यानल पूर्ण रुपले बन्द भएको छ। सूचना तथा संचार मन्त्रालयले बुधबारदेखि लागु हुने गरी एनालग टिभी च्यानल हटाएर डिजिटलबाट मात्रै टिभी संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बेइजिङले दियो चालक रहित कारलाई अस्थायी लाइसेन्स
बेइजिङ ९ चैत - बेइजिङले पहिलो चालक रहित कारलाई बिहिबार सडकमा परिक्षण ड्राइभ गर्न अस्थाइ लाइसेन्स प्लेट दिएको छ।
फेसबुकले कसरी बेच्दैछ तपाइँको डाटा?
८ चैत - संसारका मान्छेको जीवनशैली बनेको फेसबुक यतिबेला सबैभन्दा ठूलो संकट सामना गरिरहेको छ।